Winodws 10 တွင် မြန်မာစာလက်ကွက်ဖွင့်နည်း – Unicode Today
Winodws 10 တွင် မြန်မာစာလက်ကွက်ဖွင့်နည်း
8 ဇွန် 2018
ယခု Windows 10 update မှာ မြန်မာယူနီကုဒ် ရိုက်နှိပ်သုံးစွဲဖို့ရာ
1. Myanmar Phonetic Order Keyboard
2. Myanmar Visual Order Keyboard
ဆိုပြီး လက်ကွက် ၂ မျိုးပါဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာစာလက်ကွက်ကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွတ် အောက်ပါအဆင့်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
ဦးစွာ Windows key နဲ့ S key ကိုတွဲ၍နှိပ်ပါ။Search windows ဆိုတဲ့အကွက်ကလေးပေါ်လာရင် keyboard ဟုရိုက်ထည့်ပါ။
Keyboard နှင့်ပတ်သတ်သည်များပေါ်လာပါမည်။အဲ့ထဲကမှ Setting အောက်ရှိ Edit language and keyboard options ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါ။
Country or region အောက်တွင် Myanmar ကိုရွေးချယ်ပေးပါ။Languages အောက်ရှိ Addalanguage ကိုကလစ်တစ်ချက် နှိပ်ပါ။language များစွာတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး search box တွင် Burmese ဟုရိုက်ထည့်ပြီး မြန်မာစာ ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါ။ပြီးရင် Next ကိုနှိပ်ပါ။Install ကိုထပ်နှိပ်ပါ။
Windows Taskbar ညာဘက်က ENG ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် အောက်ပါပုံအတိုင်းတွေ့မြင်ရပါမယ်။အဲ့လိုမြင်ရတဲ့ Myanmar Visual Order Keyboard ဆိုတာက သဝေထိုးကိုအရင်ရှေ့ကရိုက်လို့ရတဲ့ကီးဘုတ်ပါ။မြန်မာစာကို စသင်ခါစက ရွတ်ဆိုရတဲ့အတိုင်း ရိုက်နှိပ်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် သင်ပုန်းကြီးဆိုရိုးအတိုင်း ရိုက်နှိပ်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ဆိုလိုသည်မှာ “ မေမေ” ကို သဝေထိုး မ,ရေး “ မေ” ဟု ရိုက်နှိပ်နိုင်ပါတယ်။ “ မြေ” ကို သဝေထိုး မ, ရရစ် “ မြေ” ဟုရိုက်နှိပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါအပြင် ပင့်ရစ်ဆွဲထိုး ဗျည်းတွဲများအချင်းချင်း၊ အပေါ်အောက် သရအတွဲများအချင်းချင်း၊ ဗျည်းတွဲနှင့်သရများ တွဲဆက်ရေးသားမှုများတွင်လည်း ရှေ့နောက် အစီအစဉ်များအတွက်ကိုပါ သင်ပုန်းကြီးမူအတိုင်း ဖြစ်စေရန် ပြုလုပ်ပေးသည့် အချက်လည်းပါဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အထက်၊အောက်စာလုံးများ ရိုက်နှိပ်သည့်အခါ မိမိနှစ်သက်သလို သို့မဟုတ် လက်ကျရာ ရိုက်နှိပ်သော်လည်း အလိုလျှောက် အမှန်ဖြစ်အောင် ပြန်စီစဉ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအချက်ဟာ ယခင်မြန်မာစာစနစ်များစွာကို သုံးစွဲနေသူများ အတွက် ပိုမိုအဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
နဂို Windows 10 တုန်းကလိုသဝေထိုးကို နောက်မှရိုက်တဲ့ကီးဘုတ်မျိုး လိုချင်ရင် အောက်ကအဆင့်အတိုင်းဆက်လက် လုပ်ဆောင်ပါ။
Language အောက်က မြန်မာစာ ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။Options ကိုနှိပ်ပါ။
AddaKeyboard ကိုနှိပ်ပါ။အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာရင် Myanmar Phonetic Order Keyboard ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Windows Taskbar ညာဘက်က ENG ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် အောက်ပါပုံအတိုင်းတွေ့မြင်ရပါမယ်။
အရင်တုန်းကလို သဝေထိုးရှေ့မှ ရိုက်တတ်တဲ့အတွတ် Keyman,Keymagic လို third-party software တွေထည့်သွင်းစရာမလိုတော့ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့် အချိန်ကုန် သက်သာသလို အလုပ်ရှုပ်သက်သာသွားပါပြီ။
Myanmar Visual Order Keyboard ကအရင်ရိုက်နေကျပုံစံအတိုင်း သဝေထိုးရှေ့ကနေ ရိုက်ရပါတယ်။
Myanmar Phonetic Order Keyboard ကတော့ သဝေထိုးကိုနောက်ကနေရိုက်ရပါတယ်။
အင်္ဂလိပ် နှင့် မြန်မာ ပြောင်းလိုပါက Windows logo key + Space bar နှိပ်၍ပြောင်းနိုင်ပါသည်။
Windows 10 ကို Update ပြုလုပ်လိုပါက Control Panel မှတဆင့် Update ပြုလုပ်နိုင်သလို ISO image file ကို အောက်ပါလင့်ကတဆင့် Download ရယူ၍ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Windows7လိုင်စင်ဗားရှင်း သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်လည်း Windows 10 သို့အခမဲ့ Upgrade ပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။
Myanmar3လက်ကွက်စာရိုက်နည်း
Unicode Keyboard Keyman Desktop 10
This Week: 22794
This Month: 47169